Soomaali / Somali - Victorian Multicultural Commission
Victoria waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay ku nool yihiin mujtamacyada aadka u kala duwan iskuna xiran ee adduunka. Waxaan ka kala nimid 200 waddan, waxaan ku hadalnaa 260 luqadood ama lahjadood, waxaana kala raacsanahay 135 diimood oo kala duwan.
Dowladda Victoria waxay taageertaa mujtamaca isku xiran oo dhaqamo-badan leh halkaas oo qof kastaa uu ka qaybgeli karo bulshada uuna heli karo adeegyo asagoon loo eegayn asalka dhaqankiisa, luqadiisa ama diintiisa.
Dowladda Victoria waxay ku caawin kartaa bulshooyinka dhaqamada-badan:
Deeqaha bulshada ee munaasabadaha, kooxaha da’da ah, taageerada haya’daha, dugsiyada luqadaha bulshada iyo mashruucyadooda.
Deeqaha dhismeyaasha si loo dhiso ama loo hagaajiyo dhismeyaasha iyo tas-hiilaadka
Taageerada mashruucyada wax ka qabanaya arimaha bulshada oo ay ka midka yihiin baahiyaha dejinta
Mashruucyada wada-hadalka dhaqamada iyo diimaha si loo horumariyo is-fahamka dhaqamada iyo diimaha kala duwan iyo si loo horumariyo iskaashiga bulshada
Waxaan kaloo u dabaal degaynaa kala duwanaanteena munaasabadaha waaweyn oo ay ka midka yihiin: Cashada Gala ee Premierka (Premier’s Gala Dinner), Toddobaadka Kala-duwanaanta Dhaqamada (Cultural Diversity Week), Dabaaldegga Dhaqamada-badan ee Viva Victoria (Viva Victoria Multicultural Festival) iyo Abaalmarinta Dhaqamada-badan Victoria ee Sarraynta (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).
Kula soo bax macluumaadka luqadaada.